Boris Johnson:Lama baajin booqashada Donald Trump uu ku imanaya caasimada London - Horn Future
London(Reuters)-Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa sheegay maanta oo Salaasa ah ah in aynan jirin sabab lagu baajiyo booqashada uu ku imanayo madaxweyne Donald Trump dalka Britain, kadib markii uu dhaleeceeyay madaxa Magaalada London Saadiq Khan weerarka dhiiga badan ku daatay ee ka dhacay London Bridge.
Trump ayaa waxa uu ku weeraray Twitter ka Saadiq Khan isaga oo ku eedeeyay in uu jeediyay “cudurdaar muraara dilaac ah” kaas oo uu ku yidhi dadka degan London waa in aynan ka walwalin hadii ay arkaan booliis dheeraad ah oo ku sugan jidadka caasimadda, ka dib markii uu weerarku dhacay kaas oo ay ku dhinteen 7 qof.
Johnson ayaa wareysi uu siiyay idaacada Radio ga ee BBC da ku sheegay,isagoo ka jawaabaya su’aal ahayd in ay waajib tahay in la baajiyo booqashada Trump iyo inkale, ayaa waxa uu sheegay in Khan uu ” xaq u lahaa wixii uu yidhi,sababtoo ah buu yidhi waxa uu doonayay in uu u xaqiijiyo dadka deggen magaalada joogitaanka waddooyinka ee ciidanka booliiska ee hubaysan,”.
Waxa Johson uu intaa raaciyay oo uu yidhi “waxaan soo saaray baaq oo uu oggollaaday,mana arkayo sabab loo baddilayo taas,laakiin arrinta waxa uu yidhi Saadiq Khan ee ku saabsan in uu u xaqiijiyo dadka deggan London waxaan aaminsahay inay tahay arrin aad sax u ah waxa uu ka yidhi, “.
Maramaha u dhexeeya Trump iyo Khan,isaga oo ka hadlaya Johnson ayaa waxa uu yidhi “Ma doonayo inaan ku lug yeesho maramaha u dhexeeya laba qof oo aan u maleeynayo inay si fiican u awoodaan inay isku difaacaan,”.
« US: Congressman calls for holy war against Muslims	» Taliska China oo ku qasbaya carruurta Muslimiinta ah inay badilaan magacyadooda